Labsiin Yeroo Hatattamaa Mootummaa Itiyoophiyaa Sochii Keenya Uggure, Jedhu Mormitoonnii fi Dhaabatonni Miidiyaa Walabaa
Mootummaan Itiyoophiyaa – mormiilee Bulchiisota naannoo Oromiyaa fi Amhaaraa keessatti geggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha labsiin yeroo hatattamaa baatiilee ja’aaf biyyattii keessatti labse, mirgawwan heeraa lammiwwan biyyattii qaban irratti miidhaa fidu hin qabu – ejjennoo jedhutti cichee itti fufee jira.
Daandiileen Finfinnee keessaa waan tasgabbaawan fakkaatanii mul’atan iyyuu, kanneen akka mormitoota mootummichaatti ilaalaman garuu, yeroo baay’ee hojii isaanii hojjechuu irraa ka danqaman ta’uu dubbatu.
Paartii Tokkummaa Guutmmaa Itiyoophiyaa – Meiaadiif dura-taa’aa ka ta’an – Obbo Aseffaa Habtewold, miseensonni paartii isaanii gonkumaa socho’uu hin dandeenye – sadarkaa jedhamu irra ga’uu isaa dubbatu.
Naannoo tokko irraa gara naannoo biraatti deemnee miseensota keenya dubbisuu hin dandeenyu. Aanaalee adda addaa keessatti miseensota keenya waliin walga’ii taa’uu hin dandeenyu. Dorkamee jira. Walumaa-galatti walga’ii namoota lama caalu geggeessuu hin dandeenyu. Guutummaatti sochiin keenya ugguramee jira. Haga xumura labsii yeroo hatattamaati waan tokko iyyuu hojjechuu hin dandeenyu – jedhu – Obbo Asaffaan.
Akkuma miseensota paartiilee ka biroo, miseensonni paartii isaanii garii hidhamanii, kaan ka doorsisamaa jiran ta’uu dubbatu.
Barruulee walabaa torbanitti yeroo tokko maxxansamu, kan “Addis Standard” jedhamu, labsii yeroo hatattamaa sanaa booda, manni-maxxansaa kam iyyuu barruulee isaanii maxxansuuf ehame akka hin argamiin hubachiisuudhaan, torban dabre irraa kaasee maxxansa dhaabuu beeksisee jira.
Gulaalaatuu ol’aantuun Barruulee sanaa Aadde Tsedaalee Lammaa, barruulee sana karaa interneetii baasuu kan itti fufan ta’uu beeksistee jirti. Itiyoophiyaa keessatti saba hunda irra bal’aa ka ta’e – uummatni Oromoo, bilisummmaa daran, mirgawwan abbummaa dinagee fi lafaa gaafachuudhaan gara waggaatokkoof kan hiriira mormii geggeesse yoo tahu, tarkaanfii humnoota poolisiin haga ammaatti kanneen dhibbootaan lakkaawaman tu ajjeesame – jetti – gabaastuun keenya – Maartaa Van Der Wolf.
Gabaasa sagalee dhaggeeffachuuf kana cuqaasa